जाजरकोटमा भाइरल ज्वरोको फैलियोः चिसोले एक जनाको मृत्यु
अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या १३ पुग्यो
प्रकासित मिति : २०७४ पुस २७, बिहीबार प्रकासित समय : १२:०१
जाजरकोट । जाजरकोटमा भाइरल ज्वरोका कारण एक जनाको मृत्यु भएको छ। दुई सातादेखि फैलिएको भाइरल नियन्त्रणमा नआएकाले बुधवार थप एक जनाको ज्यान गएको हो ।
जाजरकोटमा फैलिएको भाइरल ज्वरोका कारणले अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या १३ पुगेको जिल्ला स्वाथ्य कार्यालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म मृत्यु हुनेमा पाँच वर्षमुनिका सात बालबालिका र ५० वर्षमाथिका ६ जना वृद्धवृद्धारहेका छन्।
भाइरल ज्वरो फैलिएको र चिसो कटाउने न्योनो कपडाको अभाव हुदाँ बुधबार जुनीचाँदे गाउँपालिका– ५ तिप्ककी ६५ वर्षीया कालु तिरुवाको ज्यान गएको हो। पारिवारीक श्रोतका अनुसार उनी चिसोका कारण केही दिनदेखि थलिएकी थिइन्।
न्यानो कपडा नहुँदा रुघाखोकी र ज्वरोको उपचार नभएपछि उनको मृत्यु भएको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले बताएका छन।
जुनीचाँदेको वडा नम्वर २ मजकोटबाट शुरु भएको भाइरलको प्रकोप केही समय पछि वडा नं. १ र ३ फैलिएको थियो। अहिले कोर्ताङ–४, गर्खाकोट–५ र १० सम्म प्रकोप फैलिएको छ। शनिवारदेखि थालिएको शिविरमा करिब एक हजार दुई सय जनाको उपचार भइसकेको छ।
धेरै बालबालिका बिरामी भएकोले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट बालरोग विशेषज्ञ डा‍. नम्रताको नेतृत्वमा एक टोली बुधवार उक्त क्षेत्रतर्फ प्रस्थान गरेको छ।